bhimphoto: September 2015
ट्वीटरमा लेख्न मन लागेको हो । १४० भित्र संक्षेपीकरण गर्न सक्छु जस्तो लागेन । आज एकजना पूर्व सिडिअोसँग भेट भयो । लामो कुराकानी भयो ।
कुरैकुरामा उनले सोधे - प्रहरीको गोलीले हुलदंगामा सामेल नै नभएका मान्छे मर्छन् नि थाहा छ ?
म - थाहा छ । हुन्छ यस्तो ।
उनी - किन मर्छन् थाहा छ ? आन्दोलनमा सरोकार नै नभएका त नमर्नु पर्ने होइन ?
म त एकछिन अलमलिएँ । साँच्चै यो पक्ष विचारणीय छ ।
उनले नै भने - हेर्नुस् भीडको मनोबिज्ञान बुझेर प्रहरीले काम गर्छ । गर्नुपर्छ । गरेन भने उ काम लाग्ने प्रहरी होइन ।
उनले बिस्तारसँग बताए ।
प्रहरीले भीडमा गोली चलायो भने त्यो गोलीले एकजनामात्रै होइन उस्तै पर्दा सातजनासम्म ढाल्न सक्छ । र, भीडमा गोली चलाउने पनि होइन । भीडलाई तर्साउनु पर्छ । भीडमा गोली चलाए झन भयावह अवस्था हुन सक्छ । त्यसैले छेउछाउ, अन्त कतै चलाउँछ । मान्छे तर्साउँछ । एक-दुइ कसैको ज्यान गएर भीड जोगिन्छ भने जोगाउनु पर्छ भन्ने हुन्छ । तर्साउने काम गरिन्छ ।
म सोचिरहेँ अमिल्दा कुरा धेरै छन् । प्रश्न गर्ने कोण धेरै छन् । अवस्था हेर्दा-पढ्दा मन पोल्छ ।
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 7:12 PM
-एउटा त मज्जाले गुड्नेका लागि कति चल्छ ! ६ महिना होइन ?
- हो ६ महिनाभन्दा बढि टिक्दैन
-मर्मत गर्न पनि समस्यै छ । हेर्नुस्न मेरो कति ठाउँ तारले, कति ठाउँ कपडाले बाँधेको छु ।
एकले मलाइ ती बाँधेर काम चल्ने बनाएका ठाउँ देखाए । म बोलेँ - किन र मर्मत गर्न पाइँदैन ? जसले तपाइँहरूलाई वितरण गर्छन् उनीहरूले सर्भिसिङमा मद्दत गर्दैनन् ?
उनले भने - गर्दैनन् । हामीले साइकल मर्मत गर्नेकोमा पुग्यो । त्यसले के चिज हो भनेर खोलखाल पार्दापार्दै केही सामान भाँच्छ की केही न केही अपुरै बनाइदिन्छ । हामी चढ्नेलाई बरू अलि आइडिया हुन्छ की यो के चिज हो, कसरी बनाउने, बिग्रेको के हो । हेर्दा समस्या जस्तो नबुझिने हाम्रो समस्या हामीसँगै छ । कता भन्न जानु ! जसरी हुन्छ बनायो, काम चलायो । अर्को कसले बाँड्ला र साटौं भनो पर्खियो ।
चिनेका टाउका नभेट्दा
बिजुली बेटुंगे छ । गइरहन्छ । गरिरहेको काम अपुरै हुन्छ । अफिसमा जेनेरेटर नभएको होइन । सानो-सानो छ । कति पावरको थाहा छैन । गार्डलाई चलाउन भन्छु । २ घण्टा पुगेपछि आएर भन्छन् - 'सर, २ घण्टा भो । तात्यो । २ घण्टाभन्दा बढि नचलाउनु भन्ने आदेश छ ।' यति सुनेपछि के लेखुँला, गरूँला भनेर फुराएको जाँगर हराउँछ ।
खाल्डाको बड्का अफिसबाट फोन आउँछ - खोइ यार समाचार ? माल-मेटेरियलमा बल गर्न परो । सुस्त हुन भएन ।
आउँछ-आइहाल्छ भनो । लाइनले पार्ने यी मसिना सास्तीका कथा के गरिरहनु । हत्ते छ । जिन्दगी ।
अँ साँची मास्तिरको संवाद २ जना अपांगसँगको हो । मलाइ दिक्क लागेका बेला एक्लै बाहिर निस्कन्छु । कहिले मोटरसाइकलमा । कहिले पैदलै । केही घण्टाअघि बिजुली तनाव मत्थर पार्न म निस्केँ । निस्किगएँ तर, जानु पो कता यो शहरमा ? सभागृह पुगेँ ।
जननी एफफमको आयोजनामा तीज महोत्सव चलिरहेको थाहा थियो । भित्र पसेँ । घरेलु सामानको मेला पनि आयोजना गरिएको कार्यक्रममा चिनेका टाउका एउटै भेटिँन । चिनेकाहरू भेटिएनन् भने त्यतिकै बकुल्लो भएर कता उभिनु ? निस्केँ । बाहिर एकजना ह्वीलचियरमा बेलाबेला देखिने अलि पाका उमेरका दाजै देखिए । हात उठाए । हँसिला भए । मलाइ नि नौलो भीडमा के गरौं भएराको ।
बाहिर गएर उनीहरूको छेउमा एउटा खाली कुर्सीमा बसेँ । अनि मलाइ अघि हात उठाउने दाइसँग यसो अौपचारिक टाइमपास कुराकानी त गर्नै परो ।
कुरा नहुँदाका कुरा
उनीजस्ता अर्का एक पनि सँगै थिए । र, अर्का एक सपांग पनि । म ती दाजैलाई नामले चिन्दिन । समाजमा सबैलाई नाम सोधीसोधी कहाँ चिनजान हुन्छ र ! पहिले पहिले पनि यही ठाउँमा उसैगरि बसेको देखेको हो । आज पनि उसैगरि देखेँ ।
मैले सोधेँ - के दाइ खबर ?
उनले भने - के हुनु यसो टाइमपास ।
यसो मुस्काएजस्तो गरियो । कुराको अरू प्रसंग थिएन । केहीबेर मौन बसियो । नजिकै चिसो पेयको स्टलबाट एउटी राम्री मैंया आइन । हातमा चारोटा बोटल लिएर । दुइजना अपांगलाई दिइन र हामी दुइ सपांगलाई अलि संकोच मानेर दिइन । मलाइ पनि लिन संकोच लाग्यो ।
मैले ती दाइलाई भने - म पनि लिनु र ?
उनले भने - के हुन्छ त ! लिनुस्न् ।
ठीकै छ । सेक वेल बिफर यूज लेखेको सुन्तला रंगको झोल घटघट पारियो । सबै चुप । ती सपांग बोले - कार्यक्रमको तामझाम ठूलो छ । फाइदा भा होला !
अपांग१- भाको होला । भित्र ठूलो पोस्टर छ त्यसमा रेडबुलको फोटो छ । त्यसले स्पोन्सर गरेको भनेपछि यिनलाई घाटा हुने कुरै छैन ।
अपांग२- स्टल पनि पैसा लिएर राख्न देका हुन् । कहाँबाट हुन्छ घाटा ?
केहीबेर फेरि चुप बसियो ।
अनि अपांग२- हेर्नुस् हामीजस्ता असक्त भए पो दाता खोज्न नि गाह्रो । माग्दा नि कसैले पत्याउँदैनन् । माथिल्लो तला उक्लेर जान सकिँदैन । बाटामा भेटेर भन्ने हो । सहयोग दिनेले दिए नि सय/पचास । देख्नेले ल हेर यो त माग्न थालेछ भनिहाल्ने ।
मैले भने - महिलाको रेडियोले आयोजना गरेको रैछ । उनीहरूको टिम छ । यस्ता आयोजना गर्न सहयोग खोजे होलान् । अब महिला, शिक्षित, पत्रकार आदिले भनेपछि बिज्ञापन कता दिउँ भन्नेले त नपत्याइ सुख नि हुन्न । सहयोग गरिहाल्छन् नि । गरेकै होलान् ।
तीनैजनाले सहमति जनाए । फेरि चुप लागियो । कुराको प्रसंग हरायो ।
मैले भने - अफिसमा लाइन गयो । दिक्क लागेर यता आएको ।
तीमध्येका एक बोले - होइन होला । यता त आयो । मैले भर्खर जेनेटर बन्द गरेको ।
यति भनेपछि मैले उनी बिजुलीको काम गर्ने मान्छे रहेछन् भन्ने लख काटेँ ।
अपांग १- तपाइँको रूट फरक परेको होला । सबैतिर एकैपल्ट कहाँ काट्छन् ।
मैले बोलेको ठीक हो भनिरहन परेन ।
अपांग१ ह्वीलचियर छाडेर कुर्सीमा बसेका थिए । जसलाई मैले चिनेको थिएँ । शायद कतै केही काम गर्दा होलान् । म मर्निङवाक निस्कँदा कहिलेकाही सभागृह अगाडिको एउटा चियापसलमा रोकिन्छु । त्यहाँ टेबलमा पत्रिका हुन्छन् । चिया पिउन बसेका मान्छेका मोबाइलमा एफएम बजिरहेको हुन्छ । पसले बाबै गफी छन् । रमाइलो कुरा गर्छन् । चिया पसलमा देश, राजनीति, शहर र विदेशदेखि मान्छेका बिग्रेका घरबारका कुरासम्म हुन्छन् । मैले यी ह्वीलचियरमा बस्ने दाजैलाई चियाको पालोमा देख्छु । एकअर्काको नाम सोध्या छैन । उमेर ५५/६० जति हुँदो हो ।
अब सभागृहको अहिलेको कुरा । अर्का अपांग उनको ह्वीलचियरमै थिए । हामी कुर्सीमा तीनजना ।
मैले सोधेँ- यसको चक्कामा हावा हाल्नु पर्छ/पर्दैन ? अनि बिग्रँदा कसरी मर्मत हुन्छ ?
अपांग१- पर्दैन । एकपल्ट हालेपछि सधैं चलेको छ । बिग्रने यसको ब्रेक हो ।
अपांग२ - साह्रै गाह्रो छ । सरकारले मर्मत केन्द्र खोलिदिनु पर्ने ।
उनले बताए- कास्कीमा हजारजना हाराहारी यसरी ह्वीलचियरमा हिड्नेहरू छन् । नेपालमा वर्षमा सवा ९ लाख ह्वीलचियर बाहिरबाट ल्याइन्छ । नेपालमा कारखाना खोले नि हुने । चल्छ । एउटा ह्वीलचियर ढिलोमा १ वर्षमा फेरिन्छ । धेरै कुद्नेको ६ महिनामै । उमेर र ज्यानको आकारअनुसार साइज साइजका चाहिन्छ ।
अपांग२ ले उपचारका लागि इण्डिया पनि पुगेर आएको सुनाए । उता ट्राइसाइकिल चढ्छन् । हाम्रोजस्तो ह्वीलचियर देख्ता अचम्म मान्छन् । सोध्छन् - ये हजार ग्यारह सौ मे आता होगा ?
उनले भने - म त १ लाख पड्ता है । तुम्हारा ट्राइसाइकिल मिल्ता होगा ग्यारह-बारह सौ मे भन्दिन्छु । छक्क पर्छन् । हामी विदेशका यस्ता साधन चढ्छौं, इण्डियामा उनीहरूलाई जस्तो चाहिन्छ उस्तै बनाउँछन् । हाम्रो आरामदायी भनेर के गर्नु । उनीहरू जसरी ज्यानले सकिने मेहनत गर्न लाउने खालको छैन । विलासी छ ।
अपांग१ धेरै बोलेनन् । बीचबीचमा 'हो/होइन, अँ अँ' भन्दै रहे ।
अपांग२ बताउँदै गए - हेर्नुस्, यसमा हिड्दा सबैभन्दा अप्ठेरो कुरो मर्मतको चिन्तामात्रै होइन अरू पनि छन् । हेर्दा सजिलो केही छैन जस्तो लाग्छ । ट्वाइलेट गइन्छ, बाटामा फोहर कुल्चँदै गुडिन्छ । हातले चक्का घुमाउँदा हातैमा फोहर टाँसिन्छ । सबै ठाउँ झट्टै पानी पानी पाइँदैन । अनि हात फोहर भाको बिर्सेर कतिपल्ट त्यही हातले खाइन्छ ।
लामो कथा गरे । आधा/पौने घण्टा बसियो । अनि 'फेरि आउँला है दाजु हो' भनेर हिँडियो । उनीहरू पनि खुसी देखिए ।
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 5:08 PM